Gudoomiyaha Gobolka Bay oo Digniin Culus u direy dadka u dhaqan Dedmada Baydhaba Janaay. – idalenews.com
Gudoomiyaha Gobolka Bay oo Digniin Culus u direy dadka u dhaqan Dedmada Baydhaba Janaay.
Gudoomiyaha Gobolka Baay,Cabdi Aadan Hoosow ayaa uga digay Shacabka ku nool Magaalada Baydhobo in ay Gacan siiyaan Maleeshiyaadka Al shabab,ee Magaalada kusoo dhuunta.
Cabdi Aadan waxa uu xusay in ay ka war hayaan in Baydhabo ay soo galeen Kooxa uu sheegay in ka tirsan yihiin Kooxda Al shabab,kuwaasi oo doonaya in ay Weeraro iyo Falal ka dhan ah Amaanka ay fuliyaan.
“Dadka ka shaqeynaya Amni Darrada waa in aan Gacan la siin oo laga hortagaa, Sababtoo ah haddii aan Ciidanka lagala shqeyn sugida Amaanka, Gobolka waxa uu noqonayaa meel Bahal galeen ah oo Al shabab waxay doonaan ka samaystaan,’ayuu yiro Hoosow.
Gudoomiyaha Gobolka Baay, ayaa dhanka kale ku hanjabay in ay Tallaabo ka qaadi doonaan kuwa Nabada kasoo horjeeda,isagoo sidoo kale tilmaamay in ay isku Denbi noqon doonaan, Al shabaab iyo Qofkii Gabaad siiya oo Gurigiisa ku qariyo.
Amaanaka Baydhobo, ayaa waxaa uu ahaa Mudooyinkan mid soo hagaaya, waxaana iska kaashanaya Sugida Amniga Ciidamada DFS, AMISOM iyo kuwa Ethopia, oo dhowaan Magaalada dib usoo laabta,oo degay Warshada Haseey iyo Koontaroolka Magaalada.
Hadalka Gudoomiyaha ayaa waxa uu imaanaya,iyadoo Magaalada Baydhobo uu ka socda Shir weyne Maamula loogu samaynayo Koonfur Galbeed Soomaaliya,kaasi oo hadda Gaba Gabo maraya,kadib markii dhowaan lagu dhawaaqay Gudiga soo xulaya Baarlamaanka.
Daawo Barnaamijka Faaliyaha Qaranka & Gudoomiye Jawaari oo xaalad kasta ku faraxsan
Akhrinta Dastuurka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed soomaaliya oo Maalintii 3aad Galey & Fanaantii Goboladda Arlaadii oo Cadaro ka dhigey Madasha shirka.